လျှပ်ကာ Pierce Connectors
မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု Pierce Connectors
ဘဏ်ခွဲအ terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု
Din-ရထားလမ်း type ကို connection ကို terminal ကို
မိုးသည်းထန်စွာလက်ရှိ terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု
multi-ရည်ရွယ်ချက် terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု
self-မြှ connection ကို terminal ကို
မီတာသေတ္တာများအတွက် terminal ပိတ်ပင်တားဆီးမှု
အဆိုပါ switch ကို terminal ကို
Post ကိုအချိန်: ဇူလိုင်-21-2018
Terminal ကိုလုပ်ကွက်များနှင့်အဓိကညွှန်းကိန်း၏ရွေးချယ်ရေး၏အခြေခံအသိပညာဗဟုသုတဖြင့်ဝါယာကြိုးစနစ်၏အဆိုပါတာဝန်သငျတနျးမှစက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီ function ကိုထိရောက်စွာ ... ဟူသောဝေါဟာရကိုမှာ crimping frame ကို အသုံးပြု. အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန် »
မီတာလမ်းဆုံ box ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ
ယေဘုယျအားဖြင့်လယ်ပြင်၌ရှိသောတူရိယာဝါယာကြိုးမီတာလမ်းဆုံသေတ္တာအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စဉ်အတွင်းအမှားအမှတ် detect လုပ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါဟာလယ်ကိုအာရုံခံကိရိယာပေါ်တွင်သို့မဟုတ် display ကိုတူရိယာဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစပိုပြီးဌ ... စေနိုင်သည် ဆက်ဖတ်ရန် »
ရေစိုခံလမ်းဆုံသေတ္တာ features တွေ
●စို-သက်သေပြ, ရေစိုခံ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလူတန်းစား IP68 ●အသေးစားအရွယ်အစားနှင့်အလင်းအလေးချိန်●ချေးခံနိုင်ရည်●ကောင်းမွန်သောလျှပ်ကာ● Long ကဝန်ဆောင်မှုဘဝ●လွယ်ကူစွာတပ်ဆင် IP68 ရေစိုခံနိယာမ: ရေစိုခံလမ်းဆုံ box ရဲ့အင်္ဂါရပ်များ၏ထိပ်ဖုံး ... ဆက်ဖတ်ရန် »
အဆိုပါလမ်းဆုံ box ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ
အဆိုပါအလှဆင်များအတွက်ဝါယာကြိုး wire ကိုပြွန်မှတဆင့်ကြောင့်အိမ်အလှဆင်ခုနှစ်, လမ်းဆုံ box ကိုလျှပ်စစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏တဦးတည်းဖြစ်ပြီး, (ထိုကဲ့သို့သောရှည်လိုင်းအဖြစ်, သို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးပြွန်များ၏ထောင့်) ကလမ်းဆုံ box ကိုတစ်ဦးအဖြစ်အသုံးပြုပါသည် အဆိုပါဝါယာကြိုးပြွန် ... ဆက်ဖတ်ရန် »
အဆောက်အဦးများတွင်လျှပ်စစ်လိုင်းများယေဘုယျအားဖြင့်ဖုံးကွယ်နေကြသည်။ switch သည်သေတ္တာသော switch ကိုမှာ switch သည်များအတွက် box ကိုရှိပါတယ်။ switch သည် box ရဲ့ function ကို switch သည် (fixed) ကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒုတိယ switch သည်ဝါယာကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါ swit ... ဆက်ဖတ်ရန် »
terminal ဝါယာကြိုး connector ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာ
များစွာသော devices များအတွက်ကြောင့်မကြာခဏ terminal ကိုလုပ်ကွက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဆက်သွယ်မှုပြီးနောက်, ဂီယာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်လျှပ်စစ်လယ်ပြင်တွင်, terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအထူးအရေးကြီးပါသည်နှင့်ခရီးဝေး connecti နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန် »
terminal လုပ်ကွက် WUK terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ဥရောပ terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုစီးရီးသို့ ခွဲ. plug-in ကို terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုစီးရီး, Transformer terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု, wiring terminal ကို, ခြံစည်းရိုး type ကို terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုစီးရီး, နွေဦး type ကို terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုစီးရီး, ရထားလမ်းတည်ဆောက်ခြင်းနိုင်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန် »
တစ်ခုချင်းစီကို terminal ကို၏ဝက်အူသော့ခလောက်ကောင်းသောအခြေအနေဖြစ်ကြောင်းသေချာ, နှင့်ထိကပေါက်နှင့်အတူ screw နှစ်ခုအစားထိုးလိုက်ပါ။ အဆိုပါ crimping ပန်းကန်နှင့်အတူ terminal ကို ... ဖိအားပန်းကန်နှင့် (တွင်လည်းကြေးနီဝါယာကြိုးနားကိုခေါ်) wire ကိုနှာခေါင်းမတိုင်မီပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာသင့်ပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန် »
ဥရောပစံ terminal ကိုလုပ်ကွက်များခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဥရောပ၌အစိတ်အပိုင်းများလက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုလက်ရှိတိုးအဖြစ်သတ္တုစပယ်ယာ၏အပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ သတ္တု pin ကို၏အပူချိန် 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သည့်အပူချိန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်တဲ့အခါ, တိုင်းတာခြင်းပုဂ္ဂိုလ်များမည်မဟုတ်ပါ ... ဆက်ဖတ်ရန် »
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏လမ်းဆုံ box ကိုအောင်မြင်စွာမြေအောက်ရထားကရွေးချယ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏လမ်းဆုံ box ကိုအောင်မြင်စွာမြေအောက်ရထားအားဖြင့်ပွဲချင်းပြီးအများအပြားအတည်ပြုချက်ပြီးနောက်မြေအောက်ရထားကရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏လမ်းဆုံ box ဟာမြေအောက်ရထားများအတွက်အထူးလမ်းဆုံသေတ္တာအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ ဟိုင်ယန် terminal ကိုထောင့်ကွက် Co. , Ltd မှ .... ဆက်ဖတ်ရန် »
Market ကရောင်းအား No.1 terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု function ကိုမိတ်ဆက်
terminal ကို၏တီထွင်မှုရာစုနှစ်များအတွက်န်းကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 100 ခုနှစ်, စက်မှုလုပ်ငန်း ... ဖီးနစ်စဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ဝါယာကြိုးအောင်, အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များတွင်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အသစ်ထုတ်ကုန်တီထွင်ခဲ့သည်ငြင်းခုံခဲ့သ ဆက်ဖတ်ရန် »
လျှပ်ကာ Pierce Clamp ကုန်ပစ္စည်းသက်ဆိုင်သောအသုံးပြုမှုနှင့်လျှောက်လွှာ Range
လျှပ်ကာ Pierce Clamp ကုန်ပစ္စည်းသက်ဆိုင်သောအသုံးပြုမှု: လျှပ်ကာပေါက်ညှပ်သေးသေးခုခံ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှု, စဉ်ဆက်မပြတ် Clamp အင်အား, အဆင်ပြေတပ်ဆင်ခြင်း, ဘက်စုံ, ပြန်သုံးနိုင်သော insta နှင့်အတူလျောက်ပတ်သည် non-bearing ပါဝါချိတ်ဆက်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန် »
Terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုများအရည်အသွေးမြင့်မားကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, လမ်းဆုံ box ကို-ဟိုင်ယန်, Ltd. terminal ကိုထောင့်ကွက် Co. ,
ရွေးထားသည့်ကိရိယာများတွင်အသုံးပြုအမည်ခံတန်ဖိုးနှင့်လျှပ်ကာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ထုတ်ကုန်လိုချင်သောအပူချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလက်ရှိထက်နိမ့်မှာလည်ပတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ တခါတရံမှာကျစ်လစ်သိပ်သည်း PAC များအတွက်သင့်လျော်သောပစ္စည်းများ ... ဆက်ဖတ်ရန် »
ဟိုင်ယန်လမ်းဆုံ box ကိုသူတို့အားကိစ္စရပ်များအာရုံစိုက်သင့်ကြောင်းလူတိုင်းသတိပေးနေပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများလမ်းဆုံ boxes တွေကိုရောစပ်များအတွက်သင့်လျော်သောမရှိကြပေ။ ဥပမာ, သတ္တုအမှု, fireproof grounded နှင့်ခိုင်မာသောပိုကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ PVC နှင့်အခြားပစ္စည်းများပိုကောင်း insulator တွင်လည်းဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ အသုံးပြုမှုအတွက်က ... ဖျက်ဆီးဖို့မသင့်တော်ဖြစ်ပါသည် ဆက်ဖတ်ရန် »
မှတဆင့်-မြို့ရိုးကို terminal ကိုလုပ်ကွက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ analysis နှင့်အဓိပ္ပါယ်
အဆိုပါမှတဆင့်-မြို့ရိုးကို terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု 10 မီလီမီတာမှ 1mm တစ်ဦးအထူနဲ့ panel ကိုအပေါ်နားမှာခြမ်းကို install နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအလိုအလြောကျလျော်ကြေးပေးနှင့် panel ကိုအထူ၏အကွာအဝေးကိုချိန်ညှိ, ထမ်းဘိုးကိုမဆိုအရေအတွက် terminal ကိုအစီအစဉ်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် ... နိုင်ပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန် »
Wengyang မြို့စက်မှုပန်းခြံ, Yueqing စီးတီး, Zhejiang ပြည်နယ်
0086-13968745082 (မစ္စတာအဲရစ်, မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ)
တနင်္လာနေ့-စနေနေ့	09: 00-18: 00
ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကြိုးစားကြသည်။ သတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုခြင်း, နမူနာ & Quote, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!